Top:-Taliyeyaasha Ciidamadda oo iscasilaya Diini Dhego badan iyo Gacmodulle-Damu Jadiid oo qaati laga joogo
09 Febraury 2013 Waagacusub.com- Taliyeyaasha Ciidamadda Melleteriga,Asluubta ,Minishiibiyadda iyo Abaanduulaha Ciidamadda xooga dalka Somalia ayaa Istiqaalo iscasilaada u gudbiyay Madaxweyne Hassan Mohamud Alasow . Taliyaha Ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed Sareeye Gaas Abdulkadir Sheikh Ali Diini ayaa Waagacusub u xaqiijiyay inuu Istaaqilo u gudbiyay Madaxweynaha hasse yeeshee wuxuu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo sababta ku qasabtay.
" Nin weyn siduu wax u og yahay uma sheego laakiin markaan wax badan qiimeeyay waxaan go''aansaday inaan xilka iska casilo" ayuu yiri Taliye Diini oo Waagacusub,com la hadlay.
Taliyaha Ciidanka lugta Soomaaliyeed Sareeye Gaas Ali Caraaye Cosoble GACMO DULLE ayaa dhinaciisa xaqiijiyay in Cadaadis uga yimid Madaxtooyada darteed uu shaqada iska casilay.
Abaanduulaha Ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed Sareeye Gaas Cabdi Kariim Dhega badan oo Waagacusub kula hadlay telefoonka ayaa yiri " Waxaa la ii sheegay in Madaxweynaha iyo kooxdiisa la wareegay xukunka dalka doonayaan inay xilka naga qaadaan aniga iyo Taliyeyaal badan sidaas darteed waxaan go''aansaday inaan Istiqaalo u gudbiyo Madaxtooyada"
Dhega badan wuxuu sheegay in Dowladnimadu aheyn in urur diimeed talada dalka la wareego,xilli dagaal lagula jiro Khawaarijta Al-Shabaab oo bulshada ku xasuuqay magac diimeed.
Ila wareedyo muhiima ayaa tibaaxay in Madaxweynahu qorsheeyaynayay inuu xilka qaadis ku sameeyo Taliyeyaasha Ciidamadda,waxaana la saadaalinayaa inuu shaqada ka eryi doono Taliyeyaasha Boliiska ,Asluubta iyo Minishiibiyada oo aan weli Istiqaalo iscasilaada qorin